China Electric hama, electric draft chisel, SDS, Max, Hex, kapịrị ọnụ chizul, ewepụghị chizel, anọ olulu na ise olulu hexagonal chizulu, pneumatic chizel factory na-emepụta | Boda
Electric hama, electric draft chisel, SDS, Max, Hex, kapịrị ọnụ chizul, ewepụghị chizel, anọ olulu na ise olulu hexagonal chizulu, pneumatic chizul
A na-eji chisels eme ihe n’ebe a na-ewu ihe, a na-ebubata COSEL BOSENSA n’ụwa niile ， e ji arụ ọrụ nke ọma. Anyị nwere ikike ịchịkwa ihe ndị a. Ndị ọkachamara anyị na-emeziwanye ngwaahịa anyị.
Bosenda ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na ngwaike n'ichepụta obodo na China, ebe mmepụta nke chisels, malite ịgba ibe n'ibe na oghere nkwọ wdg nwere zuru uru gafee mba. Ọrụ anyị na chi anyị na nchụso nke ngwaahịa na-eme ka teknụzụ anyị na-emepụta ngwa ngwa wee tozuru oke ma na-asọmpi n'ahịa ngwaọrụ.
A na-ahụ usoro usoro chisels Bosenda n'ọtụtụ ahịa mba ụwa, azụmaahịa a na-aga n'ihu na-aga. Ndị ahịa anyị si n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa, site na North na South America, mba EU, East Eu mba, Est Asia na Middle East. Anyị ga-anọgide na-eji teknụzụ anyị tozuru etozu mepụta ngwaahịa ka mma iji gboo mkpa ahịa.
BOSENDA Electric Hammer Chisel / Chisel, na ihe 40Cr na carbon steel, 40CR na-adịgide adịgide karị, nke kwesịrị ekwesị maka mgbidi brik, mgbidi simenti, akwa na nkume. Ihe ndị ahụ bụ MAX shank, SDS shank, Hex shank, phismatical chizụ na 65A ihe odide na na, nke ha nile nwere akara, ewepụghị ma na-ebuwanye ibu chisels. Ngwugwu na-abụkarị na plastic tube, kpọmkwem chọrọ nwere ike ahaziri dị ka ndị ahịa 'ina.
Anyị na-eme OEM na ODM, mbukota nwere ike ahaziri.
BOSENDA Chisels na-eyi nguzogide siri ike, na-adịgide adịgide na arụmọrụ ndụ, ihe ndị ruru eru mere ka ike kpụọ nke chi ahụ dị n'ihu ọtụtụ n'ime ahịa ahịa.
Chisels nwere ike ji mee na oghere na ihe na brik mgbidi, ịcha na grooving. Anyị na-enye usoro zuru ezu nke ụdị dị iche iche dị ka akara mpempe akwụkwọ, obere obere mbadamba, nnukwu mbadamba mbadamba, ọkpụkpụ semicircular, nkọ chisel, wdg.
Enwere ike ikpebi ogologo nke chizul dị ka mkpa ndị ahịa si dị.
Maka ozi zuru ezu, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Nrụkọ osisi atọ arụpụtara arụ ọrụ, ịkpụ osisi, oghere mmeghe osisi, ụdị mmegharị dị iche iche
Osote: Diamond ọnwụ agụba, diamond hụrụ agụba, seramiiki tile ịkpụ agụba, marble ọnwụ agụba, konkiri ịcha agụba, hụrụ agụba
Woodcutting rawụta ibe n'ibe, stright shank, woodwork ...
Electric hama malite ịgba bit, ihe malite ịgba bit, ...
NDMỌD Tap Kpatụ, Mgbawa uzo uzo, Kwụ Ọtọ ọjà Machine ...